Health | The World of Pinkgold
Digging the Oldies!
Posted on January 25, 2009 by cuttiepinkgold
စာရေးဖို့ အချိန်မရ ဖြစ်နေတုန်းလေးမှာ ကျွန်မဘလောဂ့်က ပိုစ့်အဟောင်းတွေကို တူးဆွကြည့်လိုက်တော့ အရင်တုန်းက ရေးထားတဲ့ ပိုစ့်ကောင်းကောင်းလေးတွေကို ပြန်ဖတ်မိတယ်ရှင်.။ တစ်ချို့စာဖတ်သူတွေဆို ကျွန်မဘောလာဂ့်မှာ အဟောင်းတွေထိ တော်တော်ကြီးကို လိုက်ဖတ်တာ တွေ့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တစ်ချို့ကတော့ နောက်ဆုံးမှ တင်ဖြစ်တာတွေကိုပဲ များသောအားဖြင့် ဖတ်ကြတာပါပဲ။ အဲဒီတော့ ကျွန်မ ဘလောဂ့်ကို လာဖတ်ကြတဲ့သူတွေ အကျိုးရှိအောင် ဗဟုသုတ ရစေမယ့် ပိုစ့်အဟောင်း အကောင်းလေးတွေကို ပြန်ညွှန်းချင်ပါတယ်ရှင်။ ဖတ်ကြည့်ကြဖို့လည်း တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။ ပိုစ့် ငါး ခုလောက်တည်းပါ။ ဒါလည်း ဆားချက်ခြင်း တစ်မျိုးပဲပေါ့နော်.
1. မိန်းမတွေ ဘာကြောင့်လှချင်ကြတာလဲ
2. Vitamin That Prevent Acne
3. A BananaaDay, Keeps the Doctor Away
4. Tips of Thinking
5. Foundation We Used!
ပင့်ဂိုလ်း တစ်ကယ် ဆားချက်နေတာပါ။
Filed under General and tagged beauty, Health, thoughts |	2 Comments